August 2020 - ALANZAYAR
တစ်ဦးတည်း ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတဲ့ သုံးခွမြို့က အမေအိုကို ကူညီပေးကြပါ (ကူညီနိုင်သူအမြန်ပေါ်လာအောင် ရှယ်ပေးကြပါ)
တစ်ဦးတည်း ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတဲ့ သုံးခွမြို့က အမေအိုကို ကူညီပေးကြပါ (ကူညီနိုင်သူအမြန်ပေါ်လာအောင် ရှယ်ပေးကြပါ) တစ်ဦးတည်း ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတဲ့ သုံးခွမြို့က အမေအို ဖြစ်ပါတယ်…မကူညီနိုင်ရင်တောင် ကျေးဇူးပြုပြီး Share ပေးခဲ့ကြပါနော်။ သုံးခွမှာ တကယ် ဒုက္ခရောက်ပြီး ဆင်းရဲနေရှာတဲ့ အမေအိုကြီးတွေပါ ကူညီနိုင်တဲ့ သူတွေ ကူညီပေးကြဖို့လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ […]
(၁၉)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲမှ သိန်းတစ်ထောင်ဆု ပေါင်မြို့မှကံထူးရှင်
(၁၉)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲမှ သိန်းတစ်ထောင်ဆု ပေါင်မြို့မှကံထူးရှင် 1-9-2020 ၁၉ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲ၌ ပေါင်မြို့အတွက် သိန်း တစ်ထောင်ဆု ပေါင်မြို့ 555ထီဆိုင်လက်ခွဲလောကနိဗာန်ထီဆိုင်မှသိန်းတထောင်ဆုကို ပေါင်မြို့ကဒါရပ်ကွက်မြို့သစ်၂လမ်းဦးဖေသန်းမှ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ Credit Michael Kyaw Mya Win (၁၉)ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလသေိနျးဆုဖှငျ့ပှဲမှ သိနျးတဈထောငျဆု ပေါငျမွို့မှကံထူးရှငျ 1-9-2020 ၁၉ကွိမျမွောကျ […]
ဆားငန်ရည်နဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေး အကျိုးပြုပုံ
ဆားငန်ရည်နဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေး အကျိုးပြုပုံ ဆားငန်ရည်ဆိုတာ ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးများစွာ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းဆေးဝါးတစ်လက်ပါပဲ သွား၊ လျှာ၊ သွားဖုံး၊ လည်ချောင်းကိုလည်း သန့်ရှင်းပေးတယ်။ သွားကိုက်၊ သွားနာ၊ အနာပေါက်တာ၊ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးဖြစ်တာ၊လည်ချောင်းနာတာ၊ သွားနှုတ်ပြီးချိန်မှာ သွားဖုံးထဲ ပိုးမဝင်စေဖို့နဲ့ အနာကျက်မြန်စေဖို့ ဆားငန်ရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းတတ်ကြပါတယ် ဆားငန်ရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းဖို့ […]
ဖြူဖြူထွေးရဲ့ အလှူတွေကို သာဓုမခေါ်ရင်တောင် မဆဲကြပါနဲ့လို့ ပြောလာတဲ့ လူရွှင်တော်ပါကျဲ
ဖြူဖြူထွေးရဲ့ အလှူတွေကို သာဓုမခေါ်ရင်တောင် မဆဲကြပါနဲ့လို့ ပြောလာတဲ့ လူရွှင်တော်ပါကျဲ ပရိသတ်ကြီးရေ ဖြူဖြူထွေးလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာ ရရှိထားသလို ကောင်းမွန်ပြည့်ဝတဲ့ စိတ်စေတနာလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်တစ်ဦးကို အားလုံးပဲပြေးမြင်မိမှာပါနော်။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းသလို ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေကြောင့်လည်း အချိန်တိုအတွင်း အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြတဲ့ […]
မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ကြီးပွားချမ်းသာမယ့်အတိတ်နိမိတ်ပါ ရှယ်ခြင်းဖြင့် ကံကောင်းခြင်းတွေရယူလိုက်ပါ
မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ကြီးပွားချမ်းသာမယ့်အတိတ်နိမိတ်ပါ ရှယ်ခြင်းဖြင့် ကံကောင်းခြင်းတွေရယူလိုက်ပါ မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ ။ နမောတဿလို့ ရေးပြီးShareပါ ကံကောင်းပြီး ထူးခြားလာပါမည်။ မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်ကြီးပွားတော့မယ့်အတိတ်နိမိတ်ပါ။ ကွန်မန့်မှာ နမောတဿလို့ ရေးပြီးShareပါ။ လက်တွေ့ကံကောင်းပြီး ထူးခြားလာပါမည်။မယုံမရှိကြနဲ့နော် ။ လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ ကံကောင်းခြင်း အတိတ်နမိတ်တွေ […]
အမြဲသုံးနေတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆားထည့်ပြီး လျှော်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေထူးမလဲ ?
အမြဲသုံးနေတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆားထည့်ပြီး လျှော်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေထူးမလဲ ? တစ်ခါတလေ ကိုယ်မထင်မှတ်ထားတာလေးတွေက ကိုယ့်အတွက် အများကြီးအကျိုးပြုတတ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း သင်လုံးဝ မထင်မှတ်ထားဘဲ အမြဲသုံးနေတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကို အိမ်သုံးဆားနဲ့သာ တွဲသုံးလိုက်ရင် ဆံပင်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် သင်စိတ်ဝင်စားတယ်မလား။ ဆားဆိုတာ အိမ်နောက်ဘက် မီးဖိုချောင်ဝင်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းတွေ့ရနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းမျိုးပါ။။ […]
အမျိုးသမီးများ ” သားအိမ်ကင်ဆာ ” အတွက်ဆေးကောင်းတစ်လက်
အမျိုးသမီးများ ” သားအိမ်ကင်ဆာ ” အတွက်ဆေးကောင်းတစ်လက် ဆေးရုံက လက်လွှတ်လို့ အိမ်ပြန်ခေါ်လာတဲ့ လူနာတွေကို မြန်မာဆေးမီးတိုနဲ့ ကုခါမှ အမြစ်ပြတ် ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ မကြာခဏကြားဖူးပါတယ်။ ခုတစ်ခါလည်း တွေ့ပြန်ပါပြီ၊ သားအိမ်ကင် ဆာဖြစ်လို့ဆေးရုံက လက်လွှတ်တဲ့ လူနာတဲ့။ မြန်မာဆေးမီးတိုနဲ့ ကုလိုက်တာ ကောင်းသွားပြီတဲ့။ လူနာကလည်း ကျွန်တော်တို့ […]
မိုးရွာလို့ လမ်းဘေးကျောက်နဲ့ ဂျမ်းတုံးခုလိုက် တဲ့ ဂဲကနေ ကျောက်အောင်သွားတဲ့ ကားဆရာ
မိုးရွာလို့ လမ်းဘေးကျောက်နဲ့ ဂျမ်းတုံးခုလိုက် တဲ့ ဂဲကနေ ကျောက်အောင်သွားတဲ့ ကားဆရာ လွန်ခဲ့သော ၁၄ နှစ်ခန့်က မန္တလေးမြို့ ဈေချိုအနီးမှာ နေထိုင်၍ ကားမောင်းခြင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်သော လူငယ် တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ထိုလူငယ်လေးရဲ့ မိဘများကမန္တလေးမြို့ဇာတိခံတွေပါ၊ မိဘများရဲ့ စီးပွားရေးက မန္တလေး ဈေးချိုထဲမှာ ပခုက္ကူ ဒေသမှ […]
လူကြမ်းကို လူကြမ်းနေရာမှာပဲထားလာတယ်လို့ ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ ဦးအရိုင်းမင်း(ရုပ်သံ)
လူကြမ်းကို လူကြမ်းနေရာမှာပဲထားလာတယ်လို့ ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ ဦးအရိုင်းမင်း(ရုပ်သံ) ဟိုဘက်ခေတ်က ဦးညွှန့်ဝင်း ခြောက်သောင်းရရင် ဦးတို့ ခြောက်ထောင်ရတယ်။ ဦးကျော်ဟိန်း ငါးသောင်းရရင် ဦးတို့ ငါးထောင်ရတယ်ဆယ်ဆ တစ်ဆရတယ်။ အခုခေတ်မင်းသားတွေ သိန်းရာနဲ့ချီပြီး ယူနေတယ် ဦးတို့အတွက်က ဘယ်မှာလဲ ဆိုတဲ့ ဦးအရိုင်းမင်းလူကြမ်းကို လူကြမ်းလို့ပဲမြင်တယ် လူရွှင်တော်ဆို လူရွှင်တော်ပဲ […]
သင်ကိုယ်တိုင် မမြင်ရရင် ယုံမှာတောင်မဟုတ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်နှစ်ကောင်ကြားက သံယောဇဉ်(ရုပ်သံ)
သင်ကိုယ်တိုင် မမြင်ရရင် ယုံမှာတောင်မဟုတ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်နှစ်ကောင်ကြားက သံယောဇဉ်(ရုပ်သံ) ဒီနွားလေးက ကျုံပျော်ဇရစ်ရိုးကနွားဦးတိုက်ဆရာတော်ရဲ့နွားလေးပါ…ဆရာတော်တရားပွဲသွားတိုင်း ဆရာတော်နောက်လိုက်ပြီးသာသနာပြုတယ်..တရားပွဲပြီးတိုင်းဆရာတော်ကိုဦးတိုက်လေ့ရှိတယ်ဝက်ကလေးကတော့မကြာသေးခင်ကမှ တရားပွဲတစ်ခုမှာ နွားဦးတိုက်တာမြင်တော့ သူလည်းလိုက်ဦးတိုက်တယ် ဆရာတော်လည်းအဲ့ဒီဝက်ကလေးကို ပိုင်ရှင်ဆီကအလှူခံလာခဲ့တာ တော်တော်ထူးဆန်းပါတယ် ဒီနွားနဲ့ဝက် ကလေးကအတူတူနေတယ်။ အတူတူစားတယ်။ထူးခြားတာအများကြီးရှိပါတယ်။ရေစက်လို့ပဲပြောရမလား?နွားလေးကတော့သာသနာပြုရင်း အသက်၂၀မှာသေဆုံးခဲ့တယ်။ ဒီနွားလေးသေတော့ဝက်ကလေးလည်း တော်တော်ခံစားရတယ်။ နွားလည်ပင်းကြိုးကိုဆွဲပြီး နွားကိုနှိူးလိုက်နွားကိုယ်ပေါ်တတ်လိုက် မြေပြင်မှာလှိမ့်လိုက်နဲ့မျက်ရည်တောက်တောက်ကျပြီးငိုလိုက်ဆရာတော်ဆီပြေးသွားလိုက်နဲ့တော်တော်သနားဖို့ကောင်းပါတယ်… နွားကိုဂူသွင်းမယ့်ကွန်ကရစ် […]